ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ထောပတ်သီးစားတာ ကောင်းပါသလား? - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ထောပတ်သီးစားတာ ကောင်းပါသလား?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ထောပတ်သီးစားတာ ကောင်းပါသလား?
ထောပတ်သီးမှာ သန္ဓေသား ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုအတွက် အရေးပါသော ပိုတတ်စီယမ်၊ ဖောလိတ်နှင့် အဓိကအာဟာရတွေ ပိုမိုမြင့်မားစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် အစားအစာတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းဖို့ စိတ်ချရပါတယ်။ ထောပတ်သီးမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အတွက် ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ သတ္တုဓါတ်များ၊ ဗီတာမင်များနှင့် ကောင်းတဲ့အဆီတွေ အပြည့်အဝ ပါရှိပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ထောပတ်သီးစားတာက ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရသလဲ?
ထောပတ်သီးစားခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးအမျိုးမျိုးကတော့ အောက်ပါတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ဖောလစ်အက်ဆစ် အရင်းအမြစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ဖောလစ်အက်ဆစ် ချို့တဲ့တာက ကလေးတွေမှာ ချို့ယွင်းချက်ဖြင့် မွေးဖွားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သန္ဓေသားလေးရဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါ ကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် ဖောလစ်အက်ဆစ် အလုံအလောက် လိုအပ်ပါတယ်။ ထောပတ်သီး ခွက်တစ်ဝက်လျှင် ဖောလစ်အက်ဆစ် (5microgram)ခန့် ပေးစွမ်းပါတယ်။
၂။ သွေးအားနည်းခြင်းကို ကုသပေးပါတယ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း သံဓါတ်ချို့တဲ့တာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးမှာ သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတါင်း လိုအပ်တဲ့ သံဓါတ်ပမာဏ ပေါကြွယ်ဝပါတယ်။
၃။ အစာခြေစနစ်ကို အထောက်အကူပြုပါတယ်
အစာအိမ်ဝေဒနာနှင့် ဝမ်းချုပ်ခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အဖြစ်အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးမှာ အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် အစာခြေစနစ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများကို ကူညီပေးပါတယ်။
၄။ ဗီတာမင်တွေ အပြည့်ပါဝင်ပါတယ်
ထောပတ်သီးမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် သန္ဓေသားကြီးထွားဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဗီတာမင် B1, B2, B5, B6, C, E, နှင့် K တို့ပါရှိပါတယ်။
၅။ morning sickness ကိုတိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်
မနက်ခင်းတိုင်း ပျို့အန်တာက ကိုယ်ဝန်ပထမ သုံးလမှာ အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အစောပိုင်းလက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးမှာ ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝတာကြောင့် ဒီအခြေအနေကို သက်သာစေဖို့ အသုံးဝင်ပါတယ်။
၆။ ကိုလက်စထရောနှင့် သကြား levels ကိုထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်
ထောပတ်သီးပုံမှန်စားသုံးခြင်းက ကိုလက်စထရောကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ သကြား level ကိုထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။
၇။ ခြေထောက်ကြွက်တတ်တာကို သက်သာစေပါတယ်
ခြေထောက်ကြွက်တတ်တာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်အတွင်းမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ထောပတ်သီးက ခြေထောက်ကြွက်တတ်တာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးမှာ ငှက်ပျောသီးထက် ပိုတတ်စီယမ် ပိုမိုရှိပါတယ်။ ကယ်လစီယမ်နှင့်အတူ ပိုတတ်စီယမ်က ကြွက်တတ်ခြင်းကို လျှောချပေးပါတယ်။
၈။ သန္ဓေသား ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်
ထောပတ်သီးတစ်ခွက်မှာ သန္ဓေသား၏ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ ကလိုရင်းပမာဏ 22mg ပါဝင်ပါတယ်။
ထောပတ်သီးက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ မန်းဂနိစ်၊ သွပ်၊ ကြေးနီ၊ ဖော့စဖောရပ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ပိုတတ်စီယမ်နှင့် ကယ်စီယမ်တို့ကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
၁၀။ အာဟာရစုပ်ယူမှုမှာ ကူညီပေးပါတယ်
ထောပတ်သီးဟာ အာဟာရများစွာ ရရှိယုံသာမက တခြားအစားအစာတွေကနေ သင့်ရဲ့ အာဟာရစုပ်ယူမှုစနစ်ကိုလည်း ကူညီပေးပါတယ်။ ဥပမာ- ထောပတ်သီးက မုန်လာဥနီ၊ အစိမ်းရောင်အရွက်များနှင့် ကန်စွန်းဥတို့ကနေ antioxidant carotenoids ကိုစုပ်ယူပေးပါတယ်။
၁၁။ ကျန်းမာသော အဆီများပြည့်ဝပါတယ်
သန္ဓေသားကြီးထွားမှုအတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ ကယ်လိုရီအပို လိုအပ်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးမှာ မိခင်နှင့် မမွေးသေးတဲ့ ကလေးအတွက် အကျိုးရှိသော အိုမီဂါ-3နှင့် အိုမီဂါ -6 ဖက်တီးအက်ဆစ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
၁၂။ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်း အန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေပါတယ်
ထောပတ်သီးမှာ အမျှင်ဓါတ်မြင့်မားတာကြောင့် ဝိတ်တတ်မယ့် အခွင့်အလမ်းကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ အမျှင်ဓါတ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ပါဝင်ပါတယ်။
၁၃။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် သွေးဆိပ်တတ်ခြင်းရဲ့ အန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေပါတယ်
အသီးမှာ ပိုတတ်စီယမ်အဆင့် ကြွယ်ဝတာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် သွေးဆိပ်တတ်မယ့် အခွင့်အလမ်းကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ နှလုံးရောဂါဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အန္တရာယ်လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။
ထောပတ်သီးက အံ့သြဖွယ်အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းတာကြောင့် ဒီအသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အာဟာရအချက်အလက်များကို ကျိန်းသေ သိထားသင့်ပါတယ်။
USDA နှုန်းဖြင့် ထောပတ်သီးတစ်လုံးမှာ အောက်ပါအာဟာရတန်ဖိုးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
တစ်နေ့ကို ထောပတ်သီး ဘယ်လောက်စားသင့်သလဲ?
ထောပတ်သီးကို တစ်နေ့ တခြမ်း စားသုံးပေးတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ထောပတ်သီး အများကြီး စားသုံးလို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တာ နည်းပေမယ့် ကန့်သတ်ပြီး စားသုံးတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ထောပတ်သီးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
သင်ဟာ ဒီအခြေအနေမှာ ရှိနေရင် ထောပတ်သီး မစားဖို့၊ ကန့်သတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် အရမ်းမတတ်အောင် ကြိုးစားနေရင် ထောပတ်သီး အများကြီးစားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အစေးနှင့် ဓါတ်မတည့်ရင် ထောပတ်သီးကဲ့သို့သော အစားအစာများ စားသုံးခြင်းကို ကန့်သတ်ရပါမယ်။ ငှက်ပျောသီးကလည်း အစေးဓါတ်မတည့်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ထောပတ်သီး စားဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်က ဘယ်အချိန်လဲ?
ထောပတ်သီးမှာ ဖောလိတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားတာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အစောပိုင်းကာလအတွင်းမှာ စားသုံးတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အစောပိုင်းမှာ ဖောလိတ်အဆင့်နိမ့်တာက အာရုံကြောပြွန် ချို့ယွင်းမှုနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်နေ့ ထောပတ်သီးတစ်လုံးစားရင် သင့်ကလေးမှာ အာရုံကြောနှင့် ပတ်သတ်တဲ့ ရောဂါ မဖြစ်တော့ပါဘူး။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ေထာပတ္သီးစားတာ ေကာင္းပါသလား?
ေထာပတ္သီးမွာ သေႏၶသား ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈအတြက္ အေရးပါေသာ ပိုတတ္စီယမ္၊ ေဖာလိတ္ႏွင့္ အဓိကအာဟာရေတြ ပိုမိုျမင့္မားစြာ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ အစားအစာေတြထဲမွာ ထည့္သြင္းဖို႔ စိတ္ခ်ရပါတယ္။ ေထာပတ္သီးမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ သတၱဳဓါတ္မ်ား၊ ဗီတာမင္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းတဲ့အဆီေတြ အျပည့္အဝ ပါရွိပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ေထာပတ္သီးစားတာက ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရသလဲ?
ေထာပတ္သီးစားျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ိဳးမ်ိဳးကေတာ့ ေအာက္ပါတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
၁။ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ အရင္းအျမစ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္
ေဖာလစ္အက္ဆစ္ ခ်ိဳ႕တဲ့တာက ကေလးေတြမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ျဖင့္ ေမြးဖြားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သေႏၶသားေလးရဲ႕ ကိုယ္အဂၤါ ႀကီးထြား ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ အလုံအေလာက္ လိုအပ္ပါတယ္။ ေထာပတ္သီး ခြက္တစ္ဝက္လွ်င္ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ (5microgram)ခန္႔ ေပးစြမ္းပါတယ္။
၂။ ေသြးအားနည္းျခင္းကို ကုသေပးပါတယ္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း သံဓါတ္ခ်ိဳ႕တဲ့တာက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမွာ ေသြးအားနည္းေရာဂါျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ေထာပတ္သီးမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတါင္း လိုအပ္တဲ့ သံဓါတ္ပမာဏ ေပါႂကြယ္ဝပါတယ္။
၃။ အစာေျခစနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳပါတယ္
အစာအိမ္ေဝဒနာႏွင့္ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း အျဖစ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာပတ္သီးမွာ အမွ်င္ဓါတ္ႂကြယ္ဝတာေၾကာင့္ အစာေျခစနစ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကူညီေပးပါတယ္။
၄။ ဗီတာမင္ေတြ အျပည့္ပါဝင္ပါတယ္
ေထာပတ္သီးမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ သေႏၶသားႀကီးထြားဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဗီတာမင္ B1, B2, B5, B6, C, E, ႏွင့္ K တို႔ပါရွိပါတယ္။
၅။ morning sickness ကိုတိုက္ဖ်က္ေပးပါတယ္
မနက္ခင္းတိုင္း ပ်ိဳ႕အန္တာက ကိုယ္ဝန္ပထမ သုံးလမွာ အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေစတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အေစာပိုင္းလကၡဏာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာပတ္သီးမွာ ဗီတာမင္စီ ႂကြယ္ဝတာေၾကာင့္ ဒီအေျခအေနကို သက္သာေစဖို႔ အသုံးဝင္ပါတယ္။
၆။ ကိုလက္စထေရာႏွင့္ သၾကား levels ကိုထိန္းသိမ္းေပးပါတယ္
ေထာပတ္သီးပုံမွန္စားသုံးျခင္းက ကိုလက္စထေရာကို ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္းမွာ သၾကား level ကိုထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါတယ္။
၇။ ေျခေထာက္ႂကြက္တတ္တာကို သက္သာေစပါတယ္
ေျခေထာက္ႂကြက္တတ္တာက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အတြင္းမွာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ေထာပတ္သီးက ေျခေထာက္ႂကြက္တတ္တာကို သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။ ေထာပတ္သီးမွာ ငွက္ေပ်ာသီးထက္ ပိုတတ္စီယမ္ ပိုမိုရွိပါတယ္။ ကယ္လစီယမ္ႏွင့္အတူ ပိုတတ္စီယမ္က ႂကြက္တတ္ျခင္းကို ေလွ်ာခ်ေပးပါတယ္။
၈။ သေႏၶသား ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို တိုးျမႇင့္ေပးပါတယ္
ေထာပတ္သီးတစ္ခြက္မွာ သေႏၶသား၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ကလိုရင္းပမာဏ 22mg ပါဝင္ပါတယ္။
ေထာပတ္သီးက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ မန္းဂနိစ္၊ သြပ္၊ ေၾကးနီ၊ ေဖာ့စေဖာရပ္၊ မဂၢနီဆီယမ္၊ ပိုတတ္စီယမ္ႏွင့္ ကယ္စီယမ္တို႔ကို ေပးစြမ္းပါတယ္။
၁၀။ အာဟာရစုပ္ယူမႈမွာ ကူညီေပးပါတယ္
ေထာပတ္သီးဟာ အာဟာရမ်ားစြာ ရရွိယုံသာမက တျခားအစားအစာေတြကေန သင့္ရဲ႕ အာဟာရစုပ္ယူမႈစနစ္ကိုလည္း ကူညီေပးပါတယ္။ ဥပမာ- ေထာပတ္သီးက မုန္လာဥနီ၊ အစိမ္းေရာင္အ႐ြက္မ်ားႏွင့္ ကန္စြန္းဥတို႔ကေန antioxidant carotenoids ကိုစုပ္ယူေပးပါတယ္။
၁၁။ က်န္းမာေသာ အဆီမ်ားျပည့္ဝပါတယ္
သေႏၶသားႀကီးထြားမႈအတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္းမွာ ကယ္လိုရီအပို လိုအပ္ပါတယ္။ ေထာပတ္သီးမွာ မိခင္ႏွင့္ မေမြးေသးတဲ့ ကေလးအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ အိုမီဂါ-3ႏွင့္ အိုမီဂါ -6 ဖက္တီးအက္ဆစ္တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။
၁၂။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးျခင္း အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္
ေထာပတ္သီးမွာ အမွ်င္ဓါတ္ျမင့္မားတာေၾကာင့္ ဝိတ္တတ္မယ့္ အခြင့္အလမ္းကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ အမွ်င္ဓါတ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ပါဝင္ပါတယ္။
၁၃။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေသြးဆိပ္တတ္ျခင္းရဲ႕ အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္
အသီးမွာ ပိုတတ္စီယမ္အဆင့္ ႂကြယ္ဝတာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေသြးဆိပ္တတ္မယ့္ အခြင့္အလမ္းကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ႏွလုံးေရာဂါဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အႏၲရာယ္ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ပါတယ္။
ေထာပတ္သီးက အံ့ၾသဖြယ္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေပးစြမ္းတာေၾကာင့္ ဒီအသီးမွာ ပါဝင္တဲ့ အာဟာရအခ်က္အလက္မ်ားကို က်ိန္းေသ သိထားသင့္ပါတယ္။
USDA ႏႈန္းျဖင့္ ေထာပတ္သီးတစ္လုံးမွာ ေအာက္ပါအာဟာရတန္ဖိုးေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
တစ္ေန႔ကို ေထာပတ္သီး ဘယ္ေလာက္စားသင့္သလဲ?
ေထာပတ္သီးကို တစ္ေန႔ တျခမ္း စားသုံးေပးတာက ပိုေကာင္းပါတယ္။ ေထာပတ္သီး အမ်ားႀကီး စားသုံးလို႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္တာ နည္းေပမယ့္ ကန္႔သတ္ၿပီး စားသုံးတာက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ေထာပတ္သီးရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
သင္ဟာ ဒီအေျခအေနမွာ ရွိေနရင္ ေထာပတ္သီး မစားဖို႔၊ ကန္႔သတ္ဖို႔လိုပါတယ္။
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အရမ္းမတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနရင္ ေထာပတ္သီး အမ်ားႀကီးစားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
အေစးႏွင့္ ဓါတ္မတည့္ရင္ ေထာပတ္သီးကဲ့သို႔ေသာ အစားအစာမ်ား စားသုံးျခင္းကို ကန္႔သတ္ရပါမယ္။ ငွက္ေပ်ာသီးကလည္း အေစးဓါတ္မတည့္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ေထာပတ္သီး စားဖို႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္က ဘယ္အခ်ိန္လဲ?
ေထာပတ္သီးမွာ ေဖာလိတ္ပါဝင္မႈ ျမင့္မားတာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အေစာပိုင္းကာလအတြင္းမွာ စားသုံးတာက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အေစာပိုင္းမွာ ေဖာလိတ္အဆင့္နိမ့္တာက အာ႐ုံေၾကာႁပြန္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ေန႔ ေထာပတ္သီးတစ္လုံးစားရင္ သင့္ကေလးမွာ အာ႐ုံေၾကာႏွင့္ ပတ္သတ္တဲ့ ေရာဂါ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။
Previous articleဆိုင်နာမည်အမှားကြောင့် လူတွေမသွားကြလို့ ဆိုင်ပိတ်လိုက်ရတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ရဲ့အဖြစ်
Next articleအိမ်ထောင်ရေးသာယာပြီး တွဲလက်တွေ ခိုင်ခိုင်မြဲဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအချက် ၅ချက်
ကျန်းမာရေးကောင်းချင်သူတိုင်း သိဖို့လိုတဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု (၁၀)မျိုး
ခံစားဖူးသူတိုင်း သိတဲ့ အွန်းလိုင်းရှော့ပင်က ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာအချို့
Kyaw Htike Aung - June 10, 2019
ကိုယ်ပိုင်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ ခေတ်စားလာတဲ့နောက် လူတော်တော်များများဟာ အွန်လိုင်းကို အားကိုးပြီး freelance အဖြင့် အွန်လိုင်းရှော့ပင်ကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင်လုပ်လာကြပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာတင်ထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်က ကြိုက်လို့ မှာယူလိုက်ပေမဲ့ အွန်လိုင်းမှာတင်ထားတဲ့ပုံကတစ်ခြားရလာတာက တစ်ခြား စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေက တစ်ခြာစီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သင့်အတွက် ကျေနပ်မှုမရှိတဲ့အပြင် စိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့သာ ကြုံတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။...